Kwiminyaka emininzi abasetyhini basebenzise ukuzenzela ukufihla isikhumba, ukukhathala, ukunika ubuso babo ukubonakala kakuhle kunye nokusempilweni, kubonakalisa ukukhanya. Emva kwamawaka eminyaka, ukwakheka kuhlala kumncedisi othembekileyo kuwo onke amabhinqa. Namhlanje, akukho ntombi eyazihlonelayo ngokwakhe akayi kumshiya ekhaya ngaphandle kokwenyuka. Siyabulela ukwakheka ukuba kunokwenzeka ukudala isimo sengqondo esifanelekileyo, ukunika iimpawu zobuso ngakumbi kunye nobunzulu, ukuba ube ngumgca wokugqibela kumfanekiso. Nangona kunjalo, konke oku kukwazi ukufezekiswa kuphela xa ukwenziwa kokwenza ngokufanelekileyo nangokuchanekileyo. Ukungenasiphelo, i-inharmonious, i-puppy makeup inokulimaza kuphela. Ngako oko, into ebaluleke kakhulu kuwo onke amabhinqa ukukwazi ukukhetha indlela yokwenza kakuhle ngohlobo lobuso, ukuze ukwazi ukudibanisa ngokufanelekileyo imibala kwaye, kubalulekile, ungalokothi ugobe intonga ngokusebenzisa izimonyo.
Abaninzi bethu baye bakuva ukuba lonke uluntu luhlukaniswe ngohlobo lwemibala emibini: ihlobo, ekwindla, ebusika nasentwasahlobo. Ukubhekiselele kunoma yiphi na iindidi kuqinisekiswe ngumbala wamehlo nemilomo, i-hue yesikhumba kunye neenwele kunye neempawu zelanga. Nangona kunjalo, njani ukhetha i-makeup efanelekileyo ngohlobo lobuso?
Uhlobo lomntu "Ihlobo"
Thayipha "ihlobo" - uhlobo oluninzi oluhlukileyo noluninzi lombala. Izinwele zabasetyhini belo hlobo zihluka kwibala elimnyama ukuba lihlambe, liluhlaza, liluhlaza, liluhlaza mhlophe, kodwa alunayo i-chestnut, i-brown-brown and hues. Iibhokhwe kunye neenki - zi-brown-brown, zinyuka, kodwa zingabonakali. Ulusu leentombazana "zasehlobo" libala, lithenda, libanda. Ulusu luhambelana nokugqithisa - unabantwana abancinci abomvu, kunye nemilomo yakhe yipinki eluhlaza. Amabala atyunayo okanye ama-freckles, ukuba kukho na, unomdaka. Amehlo amantombazana anjenge "ihlobo" - grey ngeendidi ezahlukahlukeneyo. Abameli behlobo "lasehlobo" banqanda imibala eqaqambileyo, kodwa banikwa ukubonakala okuhambelana neetoni ezipholileyo.
Uhlobo "luhlobo" kuphela luyakwazi ukuthenga kwiingubo, kwiinkophe kunye nemilebe. Iipolisi zetambo kunye nezimonyo ezineempembelelo zeparlescent ngokungathi zidalwe kwala mabhinqa - kwaye akukho nto yokukhetha ayiyimfuneko. "Ihlobo" amantombazana kufuneka afune ukukhetha ngokukrakra, ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Unako ukudibanisa i-beige, i-brown kunye ne-grey nge-pink, eluhlaza okomvu okanye obomvu. Ukuba udibanisa ngeemthunzi eziphuzi, ngoko uthabathe ezo zibukeka zibukhali, zicacile, ziphazamisekile. Ukuba uhlala emthunzini weetoni eziluhlaza, kufuneka uqinisekise ukuba umlomo wakho unombala wendalo, ogciniweyo, oyingqiqo.
Uhlobo lomntu "I-autumn"
Amantombazana asemagqabini "ekwindla", ayenemibala kakhulu, ecacileyo kwaye enomdla. Umbala wentwele weentombazana "ekwindla" ahluke kwi-chestnut-brown to red-gold, eyelashes, ukukhanya okwaneleyo kodwa ubunzima, amanqatha phantsi kombala weenwele okanye amehlo. Ikhumba lemantombazana "ekwindla" igolide ephothiweyo, ayifumananga nantoni, kaninzi kukho iindawo ezininzi kunye neentlobo zesikhumba. Imilomo yamantombazana ibomvu ebomvu, i-freckles, ukuba ngaba, i-yellow-brown inombala. Amehlo yabasetyhini ngohlobo lwe "ekwindla", i-amber, emnyama emnyama, i-nutty, eluhlaza, i-turquoise, inqabile kakhulu iluhlaza okwesibhakabhaka, i-gray-blue, amehlo aluhlaza. Ipeyinti yekwindla yindalo yendalo, i-brown-brown, imibala ekhanyayo kunye nemfudumalo yehlathi lekwindla. Umgaqo obaluleke kakhulu, omele ukukhokela amantombazana "ekwindla" - zonke izimonyo kwi-arsenal yakho kufuneka zibe matte, kodwa zingabi ngamatyala. Umlomo, ojikeleze ngokucophelela ipensele ebomvu, iya kwenza ukuba ubukeka buhle. Ungayisebenzisi kakubi kakubi - kwimeko yakho, kufuneka usebenzise i-blush ecacileyo. Ukudibanisa kweempala ezibomvu zethusi kunye nemilomo kunye nezithambiso ze-autumn-blue, okanye i-verarn-red-veritish kunye ne-lipstick kunye nezithunzi eziluhlaza. Ephuzi kufuneka kukhethwe ngokufudumeleyo kunye nzulu, kunye ne-tinge ebomvu. Kodwa ngombala obomvu, "iindlovu" abafazi kufuneka baqaphele. Ukuzithemba ukugqoka kunokufudumala kunye nobunzulu obunzulu, obomvu-obomvu kunye namanoni e-blackberry. Iimpawu ezandul 'ukwenziwa kwindlela yokwenza, ezona zilungele uhlobo lwama-autumn, zidibanisa amehlo asemnyama kunye nemilomo ye-beige ephaphakileyo kunye ne-makeup smoky. Lo mfanekiso uzaliswe ngokugqithiseleyo ngumbumba kunye nefuthe eliqhaqhazelayo kwi-cheekbones kunye ne-matte powder ebusweni.
Uhlobo lobuso "Ubusika"
Olu hlobo lulona luninzi emhlabeni. Iquka amabini amancinci: ubusika-ngasentla kunye nobusika-emhlophe ekhephu.
Ixesha lasebusika-ngasemzantsi lincinci elincinane, elibonakaliswa yizinto ezilandelayo:
amaconsi amnyama kunye ne-eyelashes;
- abameli belo hlobo banomfanekiso okhulayo wesikhumba somnquma;
- itan ibomvu obomvu obomvu okanye obomvu;
- izindebe zinomgca ocacileyo kunye neentyantyambo zeplamu.
"Ubusika obumhlophe bekhephu" buninzi ngokufanayo kunye nehlobo eliqaqambileyo, kodwa ziyaziwa ngokubaluleka kwezinto ezichaseneyo. Ubusika-i-snow-white impawu zilandelayo:
- Ikhupheli ibumnyama kwaye igcwele;
- ulusu olumhlophe, olukhanyayo, olucocekileyo;
- ngomlomo nge-pink tinge;
- ayikho nhlobo i-freckles;
- i-blush ibuthathaka, i-pinki, ibanda;
- ngokushisa ilanga ulusu luba ngumthunzi womnquma.
Ngokwenziwe kunye neengubo, unokusebenzisa ngokukhuselekileyo imibala eqaqambileyo neyebileyo, kodwa iiklasi zihlala zibe zimpunga kwaye zibomvu. Unokuzama ukufumana imibala ye-shades yamaparele, nangona kunjalo, i-matte ibonakala yendalo. Kodwa i-nail polish kunye ne-lipstick ebandayo ebomvu i-pearl yombala obomvu idibanise ngokugqibeleleyo. Amantombazana ehlobo "ebusika" ahluleki awanalo i-palette ephuzi. Kodwa uya kulungelelanisa kuzo zonke iiflethi ezicacileyo kunye ezibandayo ezibomvu nge-blue tinge.
Kwaye uhlobo lokugqibela lobuso luyi "Spring"
Ezi zityalo mhlawumbi zihlaselwa. Kwimimandla yoluhlobo lwentwasahlobo, iinwele ezikhanyayo ziluhlaza, zibomvu ezikhanyayo, ezibomvu ezikhanyayo, ezibomvu ezimhlophe kunye ne-orange tints, yellow yellow. Iifowuni kunye neentshi - ukukhanya, umbala wesikhumba - i-beige okanye igolide. Amantombazana "Spring" - abanikazi bomnxeba, okhanyayo, umlomo unombala oqaqambileyo, ngokuqhelekileyo banama-golden freckles. I-Tan emantombazana "entwasahlobo" - i-golden-carrot. Amehlo abo ahlaza okwesibhakabhaka-amber, i-turquoise, eluhlaza okwesibhakabhaka, umnquma, ngaphandle kwe-iris emnyama. Ukuze kulunge ngakumbi intombazana "entwasahlobo," kuyimfuneko ukuba ucinge ngelanga lemihla kaMeyi: ilanga elibhakabhaka elincinci, imifino ekhanda, i-dandelions efudumele. Yonke le mibala iyenzela uhlobo lwentwasahlobo. Ezi ntombazana ekwenzeni zilungele ukugxininisa nokugcina ukukhanya kunye nokunyameka kwamathoni abo.
I-lipstick kunye ne-lip liner kufuneka ibe ne-tinge ephuzi, i-red-red. Kwimeko apho uyathanda ipolisi eqaqambileyo kunye nomlomo, umthunzi weliso kufuneka ukhethe amathoni amaninzi. Amathoni alubomvu, afana nobuluhlaza, kufuneka afake i-tint yellow. Xa ukhetha izithunzi ezibomvu, kufuneka zibe ne-red tinge ebomvu. Kuba "intwasahlobo" intombazana eyona nto yokwenza imvelo yendalo, eyenziwa ngetoni ezintle, ezibomvu kunye ne-salmon. Gwema iitoni ezibandayo. Kwakhona, gweba imibala emnyama kunye nemixube - yenza ukuba imvelaphi yakho yemvelaphi ibe yinto eluhlaza kwaye ilukhuni.
Chaza uhlobo lwakho kwaye uphulaphule iingcebiso zabaculi bezandla kunye ne-cosmetologists. Nangona kunjalo, into ebaluleke kakhulu yindalo engokwemvelo, eya kuncedwa ngokubumba okhethwe kakuhle.
Iqhamo zasehlotyeni: iqoqo eliqaqambileyo lokwakheka i-Essence x Chupa Chups
Yenza kwindlela yamaTiggy
Ikhanyisa yonke into! Iqoqo lehlobo le-H & M eliyigugu
Eyona mihla yamanzi entwasahlobo
Indlela yokuphatha ukubola kwezinyo kubantwana abancinci
Indlela yokuhlobisa itafile yomtshato
Inkcazelo emfutshane ye-horoscope yeTaurus
Iipancakes kunye ne-ricotta ushizi kunye ne-salmon